Mogadishu Journal » 2019 » September » 9
Mjournal :-Shirka 14 ee Qaramada Midoobay ee xaalufinta deegaanka baaba’a dhulka abaaraha iyo isbadalka cimilada ayaa ka furmay dalka India, waxaana daah-furka shirka ka qayb galay Ra’iisulwasraha dalka India Mr Narendra Modi. shirkaan ayaa waxaa sanadkaan Somali uga qaybgalay...
At least one person was killed and two others injured in a blast in Somalia’s capital Mogadishu on Monday, the police and witnesses confirmed. A police officer, who spoke to Xinhua on condition of anonymity, said the blast was a result of an improvised explosive device...
Somali government has dismissed as ‘falsehoods’ reports that the militant group Al-Shabaab has ordered the stoppage of reconstruction works at the national stadium in Mogadishu, vowing it is committed to finishing the project according to plan. Responding to local media reports...
Mjournal :-Abaar ba’an oo xilligan ka taagan dhulka baadiyaha gobolka Gedo ayaa saameysay daaqa, deegaanka iyo dadkaba. Boqolaal Xoolo dhaqato ah ayaa wajahaya xaalado macluul iyo abaaro darran, ayadoo kaliisha ay hor leedahay. Ma jirto ilaa iyo haatan cid gargaar geysey gobolka,...
DFS oo ka hadashay inay Shabaab joojiyeen Dhismaha Garoonka Stadium Muqdisho
Mjournal :-Xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in Al-Shabaab ay joojiyeen dhismaah iyo Dayactirka Tuulada Ciyaaraha Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho ee degmada Warta-Nabada Gobolkan Banaadir. Garoonka Stadium Muqdisho waxaa Galabta booqday Ra’iisul Wasaare...
Mjournal :-Wararka laga helayo Xarunta Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in Hanti Dhowrka Guud uu baaritaan ku bilaabay Xafiiska Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka, kaddib markii ay soo baxday in lacag ku dhow Hal Milyan oo dollar la isticmaalay wixii ka dambeeyay 24-kii July,...
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Magacaabay Guddiga KMG ah ee Tacliinta Sare,gudigaas oo ka kooban Shan xubnood ayaa kala ah guddoomiye, Guddoomiye kuxigeen iyo Saddex Xubnood. Wareegtada lagu magacaabay...
Mjournal :-Guddi ka socday Maamulka Jubbaland oo dhowaan Muqdisho u yimid wada hadalo ku saabsan xarigga Wasiirkii Amniga Jubbaland C/rashiid Janan ayaa sheegay in shuruud lagu lagu xiray in la sii daayo. Guddigan ayaa waxaa hoggaaminayay Guddoomiye kuxigeenka Guddiga...
Mjournal :-Waxaa goordhaw qarax loo maleenayo in uu yahay nuuca gaadiidka hoosta looga xiro uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Dekadda Weyn . Sida aan wararka ku helnay gaariga qarxay oo nuuciisi ahaa Surf ayaa waxaa watay sargaal katirsan ciidanka booliiska...
Ammaanka Xudur oo la adkeeyay & RW Kheyre oo ku wajahan
Mjournal :-Waxaa aad loo adkeeyay Ammaanka guud ee Degmada xudur oo ah Xarunta Gobolka Bakool, iyada oo lagu wado in saacadaha soo socda uu halkaasi tago Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo haatan ku sugan Magalada Baydhabo. Gudaha degmada Xudur ayaa waxaa lagu...
Al-Shabaab oo joojiyay dhismihii iyo dayactirkii ka socday Garoonka Muqdisho Stadium
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa la sheegay inay joojiyeen dhismihii iyo dayactirkii ka socday Garoonka Muqdisho Stadium oo muddooyinkii u dambeeyay ay dowladdu waday dadaalo ay ku dooneysay in muuqaalkii uu lahaa garoonka dib ugu soo celiso, kaddib tobanaan sano Garoonka ahaa xero...